एन्एम्बी लघुबित्तले सुरु गर्यो क्रेडिट एक्स नामक ऋण अटोमेसन प्रणाली « रिपोर्टर्स नेपाल
एन्एम्बी लघुबित्तले सुरु गर्यो क्रेडिट एक्स नामक ऋण अटोमेसन प्रणाली
काठमाडौं, १६ असार । एन्एम्बी लघुबित्त बित्तिय संस्था लिमिटेडले एस्.बी. सोलुसन्स् प्रा.लि. सँग सहकार्य गरेर क्रेडिट एक्स नामक ऋण अटोमेसन प्रणालीलाई लाइभ गरेको छ । यसले इन्टर्नल ऋण वर्कफ्लो, जोखिम मूल्याकंन, ऋण स्वीकृतिलाई स्वायत्त र डिजिटाइज गर्ने जनाईएको छ ।
एन्एम्बी लघुबित्त बित्तिय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आनन्द पान्डे र एस्.बी. सोलुसन्स्का अध्यक्ष विपुल ढकालले आ–आफ्नो संस्थाको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
क्रेडिट–एक्स (ऋण अटोमेसन प्रणाली) को थालनी सँगै, लघुबित्त संस्थाहरूले पूर्ण रूपमा कागज निर्भर ऋण कार्यप्रवाह गर्न सक्षम हुनेछन् । यसले प्रणाली भित्र जोखिम प्यारामिटरहरूको अनुगमन गरेर ऋण लिएका ग्राहकहरूसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई पनि सहयोग पु¥याउनेछ ।
यो नयाँ तरिकाले लघुबित्त संस्थालाई द्रुत गतिमा ऋण प्रक्रिया पूरा गर्न मद्दत गर्दछ । प्रणालीले जमानत र गैर जमानत बेस लोन पनि प्रोसेस गर्ने गर्दछ ।
यस नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन भएसाथै, लघुबित्त संस्थाहरूका उपभोक्ताहरूले प्रशोधन र ऋण स्वीकृति प्रक्रियाको टर्न अराउन्ड समयमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी कटौतीको अनुमानित लाभ लिन पाउनेछन् । एन्एम्बी लघुबित्त बित्तिय संस्था, राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था हो । यस संस्थाले एक मजबुत र भरपर्दो लघुबित्त संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता लिएको छ । एन्एम्बी लघुबित्त बित्तिय संस्था को लगभग २ लाख भन्दा बढि ग्राहक रहेका छन् र देशभरि ११० भन्दा बढि शाखाहरु रहेका छन् ।